မောလ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
Loading ... မတ်လ 2018 ၏အဖြစ်လောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုမော်လ်တာအတွက်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ကြသည်။ မော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင် (MGA) မော်လ်တာအားလုံးကိုလောင်းကစားများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိစည်းမျဉ်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ခရုဇ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ထီ, ဘင်ဂိုကစားခန်းမ, ဂိမ်းစက်တွေနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု၏ဂိမ်းများကိုပုံမှန်ပြိုင်ပွဲ: လောလောဆယ်တိုင်းပြည်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောလောင်းကစားဝိုင်းတခုကြီးမားရွေးချယ်ရေးရှိသေး၏။
ကဏ္ဍကအွန်လိုင်းလောင်းကစားမော်လ်တာအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာကဏ္ဍများတဦးနှင့်ဝေးလံခေါင်သီဂိမ်းကစား၏စည်းမျဉ်းများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မော်လ်တာအတွင်းပထမဆုံး site ကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစား 2000 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်နှင့်အွန်လိုင်းအားကစားလောင်းကစားအတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်။ ဧပြီလ 2004 မှာတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းညှိမယ့်ဥပဒေမူဘောင်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ မော်လ်တာအီးယူ, အပြည့်အဝအွန်လိုင်းလောင်းကစားထိန်းညှိ၏အတိုင်းအတာ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းပြည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်မော်လ်တာ၏လိုင်စင်လောင်းကစားဝိုင်းနီးပါးအားလုံးအမျိုးအစားများအွန်လိုင်းပံ့ပိုးပေးထုတ်ပေးရန်စတင်ခဲ့သည်။ မစ္စတာအစိမ်းရောင်, Betsson, လောင်းကစား-မှာ -home, Interwetten အပါအဝင်မော်လ်တာအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းလိုင်စင်အပေါ်အပြေးဂိမ်း၏လူသိအများဆုံးပေးသွင်း, အချို့သည်။
ထိပ်တန်း 10 မောလ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
မော်လ်တာကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်မော်လ်တာကနေကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်များနှင့်သင်တန်း၏လောင်းကစားရုံသင်ယူခြင်းက tours, ဘောလုံး, ပင်လယ်, - မော်လ်တာအတွက်အားလပ်ရက်။ မြေထဲပင်လယ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့နေသာကျွန်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်သံတမန်ရေးရာမသာဖြစ်လာပေမယ့်လည်းဥရောပ၌လောင်းကစားဝိုင်းအသက်တာ၏မြို့တော်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေရအောင်!
မော်လ်တာ - တည်နေရာနှင့်သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. အကျဉ်းချုံး;
မော်လ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ features တွေအတွက်အကျော်ကြားဆုံးမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ:
ကာစီနို di Venezia;
လိပ်စာများနှင့်အတူမော်လ်တာ Valletta ၏မြို့တော်ငါးခုမြင်ကွင်းများ;
မော်လ်တာသို့မဟုတ်မော်လ်တာသမ္မတနိုင်ငံ - မကြာခဏပျူငှါနွေးထွေးသော Shard ဗြိတိန်အဖြစ်ကိုရိပ်မိသောကိုယ့်တောင်ဘက်စစ္စလီကျွန်း၏မြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိကျွန်းတစ်ကျွန်း, ။ သူ၏အဆင်းလှအမည်ပြည်နယ်, ဖိုနီးရှားကနေ malat "အမိုးအကာ" အဖြစ်ဘာသာရာ၏ဘာသာစကားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ပေမယ့်ကျွန်းများ၏ဧရိယာ, မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြွယ်ဝသောသမိုင်းသေးငယ်သည်။ မော်လ်တာအာဖရိကနှင့်အာရှဥရောပကနေလမ်းကြောင်း၏လမ်းဆုံမှာတည်ရှိပြီးသောကြောင့်ဤအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သေး VIII ရာစုဘီစီ၌တည်၏။ အီး။ ဖိုနီးရှားနှင့်ဟေလသလူ, ဤမြေကြီးသို့ရောက်ကြ၏။ ရာစုနှစ်များစွာအဘို့, ပြည် Carthaginians, ရောမ, ဘိုင်ဇင်တိုင်း, အာရပ်, norman, စပိန်, Brit မှလွန်။ ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေအပြည့်အဝလွတ်လပ်ရေးသာ 1964 အတွက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
မော်လ်တာ၏မြို့တော်မော်လ်တာ၏အမိန့်အားဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည် Valletta ဖြစ်ပါသည်နှင့်တူရကီအနေဖြင့်မြို့ခုခံကာကွယ်ရန်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်ဂျင်းက de La Valletta ပြီးနောက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့တွင်မော်လ်တာကသမ္မတမာရီ Louise Coleiro Preca ဦးဆောင်သောပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်များ၏အနေအထားသည်ယောသပ်မပ်စ်ကတ်မှပိုင်ဆိုင်သည်။
အဆိုပါပါကျွန်းအစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်ဧည့်သည်များ, အလောင်းကစားရုံစိတ်ဝင်စားနေသောလောင်းကစားဝိုင်းလူများ, မချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မော်လ်တာကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာ, လောင်းကစားသမားတွေ၏အနှစ်သက်ဆုံးနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင်လို! အားလုံးပြီးနောက်, သေးငယ်တဲ့ဧရိယာရုံ 316 စတုရန်းမီတာအတွက်။ မဟာကာစီနိုထံမှ4ကီလိုမီတာ: Portomaso မှာ Oracle ကကာစီနို, Dragonara ကာစီနို, ကာစီနို di Venezia, ကာစီနို။
တိုင်းလောင်းကစားအိမ်သူအိမ်သား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းနှင့်အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ စစ်မှန်သောတဦးတည်း: တစ်ဦးချင်းစီလောင်းကစားရုံကစားတဲ့, Blackjack, ကာရစ်ဘီယံ Poker, လုံး, တက္ကဆက် Hold'em, သုံးကဒ် Poker, အမှတ်ဗလာ, French သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ကစားတဲ့နှင့်မြောက်မြားစွာ slot ကစက်တွေကစားရန်နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
မော်လ်တာခုနှစ်တွင် 18 နှစ်ပေါင်းကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်အဆိုပါလောင်းကစားရုံဖို့ဝန်ခံချက် 25 နှင့်အတူဖွင့်လှစ်သောတိုင်းပြည်ကိုယ်နှိုက်၏နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဧည့်သည်များ၏ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ကိုမှာသူ့ကိုအတူကဖမ်းပြီးမှချေနိုင်အောင်, တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မေးရန်သေချာစေပါ။
အဆိုပါမောလ််စားဆင်ယင် code ကိုမှအတော်လေးသစ္စာစောင့်သိကြသည်, အဝတ်ဒါရဲ့ကုန်အံ့ type ကိုစမတ် / ပေါ့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီတိုများနှင့်ပွင့်လင်းရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဖိနပ်အတွက် - သာရေချိုးဝတ်စုံ၌၎င်း, 20-00 ပြီးနောက်ခွင့်မပြု။ ပင်ဧည့်သည်များမရပုံသဏ္ဍာန်ကိုဝတ်ဆင်ဒါပေမယ့်သင်, အထဲမှာဒီမှာဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့လည်စည်းကိုငှားဖို့လုံလောက်တဲ့ရနိုင်သည်။ ဒါဟာဖောက်သည်ညနပေိုငျးအဝတ်အစားတွေအားလုံးကိုမောလ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပူဇော်ကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအရပ်ဌာနကိုလည်းဒီမိုကရေစီလောင်းကစားရုံဟုခေါ်သည်။ ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုဖြစ်သည် - ဒါဟာ * အ Dolmen Resort ကို Complex4၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကျွန်း၏မြောက်ဘက်တွင်စိန့်ပေါလုရဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်အော်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်သောအရပ်တို့ကိုမ 10 ကနေအရှုံးလောင်းကစားရုံပြန်၏အမှု၌% သောပမာဏကို 20 ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကပထမဦးဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံက 1964 ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်, မော်လ်တာ၌ထငျရှားဖြစ်ပါတယ်။ 1870 built-in - အဆောက်အဦးအများကြီးအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်။ ယခင်ကက Emmanuel Scicluna တစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၏နေအိမ်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုစိန့်ဂျူလီယန်ရဲ့ကြောင့် Dragonara ကာစီနိုညဉ့်အခါအသက်တာ၏နှလုံး၌တည်ရှိသည်။
ကာစီနို di Venezia
ဤသည်လောင်းကစားရုံသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦး၏ပထမဦးဆုံးမိနစ်ကနေအထင်ကြီးစရာဖြစ်ပါသည် - 1685 အတွက်စိန့်ဂျွန်၏ Knights နေဖြင့်စိုက်ထူမှူးရဲ့နန်းတော်။ ဧည့်သည်ကို Grand ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခမ်းနားအမြင်ပျော်မွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်လမျးလြှောကျသှားခွငျး Vittoriosa တစ်လျှောက်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကသုံးထပ်တိုက် ensemble အထူးနေရာအရပ်၏အတွင်းပိုင်းအတွက် Murano ဖန်, ရောင်စုံ, ကြီးမား chandeliers နှင့်ရှေးဟောင်းပရိဘောဂမှပေးထားသည်ထူးခြား၏။
ဤသည်လောင်းကစားရုံစိန့်ဂျူလီယန်၏ဇိမ်ခံရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဇိမ်ခံ penthouse နှင့် 5-ကြယ်ပွင့်တိုက်ခန်းများ, ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်, အဟီလ်တန်ဟိုတယ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အခါလောင်းကစားရုံရေငုပ်စင်တာ။
အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံရှိတရားဝင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကမော်လ်တာလောင်းကစားကိုချစ်အဘယ်အရာကြောင့်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာလူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လောင်းကစားဝိုင်း site ကိုဖန်တီးရန်လိုင်စင်ကိုရနိုင်ပေမယ့်သေချာပေါက်တစ်ဦးမောလ်ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်ဘူး။ အားလုံးဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအမောလ်အော်ပရေတာကောက်ယူရပါမည်။
အထိုင်စက်တွေ, ကစားတဲ့နှင့်ကဒ်ဂိမ်းများကိုအတူမောလ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုအခြားထက်အများကြီးပိုပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအလွတ်လပ်ခွင့်ကရှင်းပြသည်။ အပျော်တမ်းသင့်ကွန်ပျူတာကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲငွေ play, သူတို့ကပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ မော်လ်တာမှာ, အငြိမ့်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာ, တရားဝင်အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရန်းမာစတာရဲ့နန်းတော်။ နေရပ်လိပ်စာ: နန်းတော်ရင်ပြင် / လမ်းသမ္မတနိုင်ငံ, Valletta ။ ဤသည်ခံတပ်, La Valletta ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်, သမိုင်းဝင်စင်တာ၏စိတ်နှလုံးသည်။ ဤတွင်လွှတ်တော်နှင့်သမ္မတ၏နေအိမ်သို့ဖြစ်ပါတယ်။
စိန့်ယောဟန်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။ တည်နေရာ: စိန့်လူစီယာရဲ့လမ်း, Valletta ။ ဂျင်း de la Kassera ၏အမိန့်ဖြင့်စိုက်ထူသည့်ဘုရားကျောင်းမှာ၏အဆောက်အဦးတစ်ခုခံတပ်ဆင်တူပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးမော်လ်တာ၏မဟာ Siege ပြီးနောက်စတင်ခဲ့သည်။ အဓိကဘဏ္ဍာကို Caravaggio ကပန်းချီကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနိုက်၏သင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်ဆနျးစစျဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Triq Ir-Repubblika, Valletta ။ စိတ်ဝင်စားစရာပြတိုက်အဆောက်အဦ - က 16th ရာစု Auberge က de Provence တစ်အိမ်ကြီးအဖြစ်ပြပွဲသည် Neolithic ကာလ (5000 ဘီစီ) ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အဖိုးတန်အပိုငျးအရှိပါသည်ရသော။
အမျိုးသားစစ်ပွဲပြတိုက်။ တည်နေရာ: စိန့်ဝိန်း Fort ။ Elmo, Valletta ။ အဆိုပါပြတိုက်ကိုမကြာခဏမြေထဲပင်လယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလုပ်သမိုင်းဝင်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ယခင်ယမ်းမှုန်သိုလှောင်မှု၌ကျိန်းဝပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မော်လ်တာအပျက်အယွင်းအတွက်ကျွန်းဖေါ်ပြခြင်း, ထူးခြားသောဓါတ်ပုံ 1941-1943 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
Manoel ပြဇာတ်ရုံ။ နေရပ်လိပ်စာ: 115 Triq က-Teatru ဌ-Antik, Valletta ။ ဒါဟာ Grand Master Manoel က de Vilho ၏အမိန့်အားဖြင့် 18th ရာစု built-in တိုင်းပြည်အတွင်းရှေးအကျဆုံးပြဇာတ်ရုံဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင်အစုံ, ဝတ်စုံနှင့်ပန်းချီကားများများစုဆောင်းခြင်းသိမ်းဆည်းထားသည်။
ခရီးသွားလာရေး - စီးပွားရေးတိုင်တပါးတည်း။
မော်လ်တာရဲ့ဘယ်ဖက်လက်အသွားအလာအပေါ် traffic ။
မော်လ်တာတက္ကသိုလ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် 1592 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
စစ္စလီကျွန်းနှင့်မော်လ်တာ 93 ကီလိုမီတာအကြားပေမယ့်အတိတ်အတွက်ကျွန်းများအကြားတံတားဖြစ်ခဲ့သည်။
0.2 ထိပ်တန်း 10 မောလ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.1.0.1 Oracle ကကာစီနို
3.1.0.2 Dragonara ကာစီနို
3.1.0.3 ကာစီနို di Venezia
3.1.0.4 Portomaso မှာကာစီနို
3.2.1 Valletta ဆွဲဆောင်မှု